Sisavulekile eseMeya | IOL Isolezwe
Isolezwe / 1 June 2012, 12:44pm /
UNKK Phindile Sishi oyiPhini leMeya eMandeni osabambe isikhundla njengoba ingakaqokwa iMeya emi noSomlomo oqokiwe ohlwini labangaba iMeya Mnuz Cebolenkosi Mfekayi noNksz Makhosazane Zungu. Isithombe: PATRICK MTOLO
SEKUGAMENXE inyanga yesibili ingakabekwa namanje iMeya yaseMandeni selokhu kwashona uNksz Lindiwe Shabalala owayeyiMeya ngo-Ephreli.
Okwamanje izintambo zisabanjwe oyiphini uNkk Phindile Sishi njengoba kungakahlelwa lutho ngokuqokwa kweMeya entsha.
Lesi sikhundla esigaqelwe amakhansela amane akule ndawo e-ANC okubalwa kuwo uMnuz Cebolenkosi onguSomlomo, iPhini leMeya elibambile uNkk Phindile Sishi, uMnuz Bhekithemba Magwaza noMnuz Sphesihle Zungu.
IMeya ebambile ithe ukukhethwa kweMeya kusezandleni zenhlangano ebusayo kule ndawo okunguKhongolose.
Uthi nabo bebengakabikelwa ngokuzokwenzeka basalindele umyalelo ozovela ehhovisi lesifundazwe.
USomlomo uMnuz Cebolenkosi Mfekayi ukuqinisekisile lokhu wathi babe nesivumelwano nomkhandlu nekomiti lamakhansela ukuthi kukhethwe amalungu azoba sohlwini lokuqokelwa kulo msebenzi.
UNkk Sishi uthe kusezandleni zekomiti lamakhansela ukuthola umuntu ozongena kulolu hla bese i-ANC ezingeni lesifundazwe ikhetha ozoba iMeya.
Uthe kungenzeka ukuthi okwenza kuthathe isikhathi ukubekwa kweMeya wukuqokwa kwelungu elizongena esikhundleni sekomiti eliphezulu ngenxa yokuvuleka kwesikhala ngesikhathi kushona uNksz Shabalala.
“Ngeke sijahe ukukhetha iMeya ngoba silandela imigomo futhi asizenzeli thina. Ayikho inqola ehamba ingenakhanda, iMeya izokhethwa. Ukubekwa kweMeya esikhundleni kuzokwenzeka ngesikhathi noma singakabekwa okwamanje. Engingakusho ukuthi akuphazamisekile ukusebenza kulo Masipala konke kuhamba ngendlela.”usho kanje.
Okuvelile wukuthi angeke uphele lonyaka ingakabekwa.